LibreOffice Inosheedzera Nyowani MUFFIN Interface yaNdira | Linux Vakapindwa muropa
LibreOffice timu yekuvandudza yazivisa uye yaunza yayo nyowani MUFFIN interface, chinongedzo chakarongerwa kuvhurwa mumwedzi waNdira wegore rino nyowani unouya pamwe neshanduro nyowani yeLibreOffice, vhezheni 5.3.
ZITA raMufini ndizvo chaizvo chirevo muChirungu che «My User Friendly & Flexible Interface«, Sezvo isu tiri kuzotsvaga inogadziriswa, inoshamwaridzika uye nyore kushandisa interface pane chero chishandiso.
Tichakwanisa kusarudza pakati penzvimbo ina dzakasiyana dzakasiyana, imwe neimwe ine bhatiro rayo rakazara. Izvi zviri kuzokutendera kuti usarudze dhizaini iwe yaunofarira zvakanyanya, sevamwe vanhu vanofarira bha neimwe nzira uye vamwe vakaita sebhawa neimwe nzira.
Pasina kupokana, chipo chakakura kubva kumadzimambo kubva kuLibreOffice, sezvo vanhu vazhinji vainendiri kuzoda kuve neyakawanda inogadziriswa uye inoshamwaridzika hofisi suitesezvo paine vamwe vanhu vasati vajaira kushandisa chero chinhu kunze kweMS Office parizvino.
Ehe, MUFFIN Haisi yega chipo cheKisimusi chatinounzwa neLibreOffice, kubvira nhasi matsva ekuwedzera uye matemplate akaunzwa kuti ashandise neLibreOffice uye nekuwedzera mashandiro ayo.
Kana iwe uchida kuyedza iyo Beta vhezheni yeLibreOffice 5.3, unogona kuzviita kuburikidza kubva pane iyi link, kuwanikwa kweWindows, Mac OS X uyezve yeLinux. Ehe, yeuka kuti haisi vhezheni vhezheni uye kuti mashandisiro ayo munzvimbo dzebasa haakurudzirwe, nekuti inogona kunge iine zviputi.
Yeiyo yakagadzikana vhezheni, nekuti ikozvino tichafanirwa kumirira kuenda kwake zviri pamutemo. Izvo kana, zvirokwazvo kumirira kwakakodzera. Semazuva ese, isu tinotaurira kuburitswa zviri pamutemo kweshanduro iyi nekukurumidza patinozoiziva zviri pamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » LibreOffice inozivisa iyo nyowani MUFFIN interface yaNdira
Ngatimirirei ipapo, isu takamirira makore ekuchinja mune chitarisiko cheedu anodikanwa LO kuti mavhiki mashoma haaite mutsauko.
Neiyo interface vanhu vazhinji vanozoenda kuLO uye kunyangwe kuLinux
Pindura kune sainzi
Maitiro ekuisa Caliber pane chero GNU / Linux kugovera